Guddoomiye Aadan Xaaji oo soo jeediyay fikrad wax ka taraysa shaqo abuurka | Berberanews.com
Home WARARKA Guddoomiye Aadan Xaaji oo soo jeediyay fikrad wax ka taraysa shaqo abuurka
Guddoomiye Aadan Xaaji oo soo jeediyay fikrad wax ka taraysa shaqo abuurka
Hargeysa-(Berberanews)-Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Somaliland Aadan Xaaji Cali, ayaa soo jeediyay fikrad dhaqaale abuur oo sanduuq dhaqaale
loogu sameeyo ardayda Barnaamijka Shaqo Qaran si ay iyaguna shaqo ugu sii abuuraan bulshada Somaliland.
“Mustaqbalka waxaan soo jeedinayaa in dadka danbe ee la qaadanayo loo sameeyo sanduuq, loogu abuuro shaqo. Dabadeedna dadka bartay dhaqaalaha, caafimaadka, tiknoolajiyada iyo ganacsiga ay iyagu shaqo u sii abuuraan, si ay iyagu wax usoo kordhiyaan oo muwaadiniinta kale ee Somaliland shaqo ugu abuuraan, oo layidhaa barnaamijka shaqo qaran, shaqo uun may raadsane iyagii baa shaqo abuuray”. Ayuu yidhi Guddoomiye Aadan.
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ahna guddoomiyaha guddida cadaaladda jamhuuriyadda Somaliland ayaa hadalkan ka jeediyay maanta xarunta maxkamadda sare oo uu ku qaabilay dhallinyaradii soo dhamaysatay barnaamijka shaqo qaran, qaybtii dooratay in ay ka hawl-galaan maxkamadaha dalka.
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare, garyaqaan Aadam Xaaji Cali oo ay wehelinayeen guddoomiyaha hay’adda shaqaalaha dawladda Farxaan Aadan Haybe, Agaasimaha guud ee shaqo-qaran Maxamed Xuseen Cisman (Mu’adinka) iyo masuuliyiin ka tirsan maxkamadda sare ayaa soo dhaweeyay dhallinyaradii soo dhamaysatay, barnaamijka shaqo qaran.
Dhalliyaradan oo tiradoodu tahay 31 qof oo ka kala yimid lixda gobol ee waaweyn, ayaa laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 09/02/2021 si rasmi ah uga hawl-gali doona maxkamadaha kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Somaliland.
Sidoo kale qaar ka mid ah dhallinyaradii shaqo-qaran ayaa dareenkooda cabiray, waxaanay xuseen in ay ku faraxsan yihiin in ay maanta shaqada si toos ah u bilaabayaan.
Gabagabadii guddoomiyaha Maxkamadda Sare Aadam Xaaji Cali Axmed ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay dhallinyarada soo dhamaysatay barnaamijka shaqo-qaran ee ka hawl-galaya maxkamadaha dalka, waxaanu bogaadiyay masuuliyiintii hir-galisay barnaamijkan oo uu ugu horeeyo madaxeynaha JSL mudane Muuse Biixi Cabdi, sidoo kale waxa uu dhallinyarada u hoga-tusaaleeyay in ay tahay wax fiican in qofku kartidiisa iyo aqoontiisa wax ku helo.
Guddoomiyaha maxkamada sare
maxkamada sare ee
Previous articleSucuudiga oo Somaliland ku soo celiyay Markab sida 17 kun oo neef
Next articleSomaliland maxay ka tidhi Markab Xoolo ah oo Sucuudigu soo celiyay?